सबैभन्दा धनी रेस्लरहरु (सुची सहित) » Mero Khel
७,माघ,२०७७ ( Wednesday, January 20, 2021 ) 11: 22 pm
सबैभन्दा धनी रेस्लरहरु (सुची सहित)
MeroKhelPosted on १३,भाद्र,२०७७ August 29, 2020 ५ महिना पहिले
एजेन्सी । टेलिभिजनका पर्दामा रेस्लिङ हेर्दा बलिया कुस्तीबाजहरू लडेको हामी धेरैले देखेका छौं । विश्वभर जस्तै नेपालमा पनि रेस्लिङको क्रेज छ । रेस्लिङलाई खेलको रुपमा मान्ने एउटा जमात र नाटकको रुपमा मान्ने अर्को जमात प्रसस्तै भेटिए पनि जोन सिन्हा, अण्डटेकर, विग सो, ट्रिपल एच लगायतका रेस्लरहरुको नाम चिरपरिचित छ । नेपालमा पनि हिमालयन टाइगर लगायतका चर्चित रेस्लरहरु छन् । नेपालका बिभिन्न ठाउँमा बेलाबेलामा रेस्लिङ प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
आज हामी रेस्लिङसँग सम्बन्धीत रहेर डब्ल्यूडब्ल्यूईका सबैभन्दा धनी रेस्लरहरुको चर्चा गर्दैछौं ।
१०. मिक फोली
डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार मिक फोली र्सवाधिक कमाउने रेस्लरको सुचीमा १० नम्बरमा छन् । डब्ल्यूडब्ल्यूईमा आफ्नो करियरको क्रममा मिक फोलेले तीन पटक विश्व च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । उनलाई २०१२ मा डब्ल्यूडब्ल्यूई हल अफ फेममा सामेल गरीएको थियो । मिक फोलेले २०१२ मा नै रेस्लिङबाट संन्यास लिएका थिए । द सनको रिपोर्ट अनुसार उनको कुल सम्पत्ति ११ दशमलव ६ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
सर्वाधिक धनाढ्य रेस्लरको सुचीको नावौं स्थानमा क्रिस ग्यारीकोको नाम छ । डब्ल्यूडब्ल्यूई रिङमा झन्डै तीन दशक बिताइसकेका क्रिस आधुनिक रेस्लीङका आइकन समेत मानिन्छन् । उनको कुल सम्पत्ति १३ दशमलव ९ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
सर्बाधिक लोकप्रिय रेस्लर मध्ये एक सुपरस्टार हुन् बिग शो । उनलाई रिङमा देखेर सधैं सबै रोमाञ्चक हुने गर्दछन् ७ पटकका विश्व च्याम्पियन बिग शोको शरीर जस्तै भारी छ उनको सम्पत्ति पनि त्यतिनै धेरै छ । उनको कुल सम्पत्ति १५ दशमलव ५ मिलियन पाउण्ड रहेको द सनको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नु्होस्ः किर्तिमानका धनी ‘धोनी’
७. ब्रोक लेस्नर
वर्तमान समयमा डब्ल्यूडब्ल्यूई रिङमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका ब्रक लेस्नर पनि धनी सुपरस्टारहरूको सुचीमा समावेश छन् । २०१९ मा सबैभन्दा धेरै कमाउने स्टार ब्रोक लेस्नर कुल सम्पत्ति १९ मिलियन पाउण्ड रहेको छ । उनी सातौं धनी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हुन् ।
६. कर्ट एङगल
कर्ट एङगलको बारेमा कुरा गर्दा उनले डब्ल्यूडब्ल्यूईमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले धेरै कमाई गर्थे । कर्ट एङगले डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रवेश गर्नु अघि पनि धेरै ब्राण्डहरूको लागि रेस्लीङ खेलिसकेका छन् । कर्ट एङगलको कुल सम्पत्ति १९ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
यो पनि पढ्नु्होस्ः प्रदेश १ को फुटबल: राष्ट्रिय टोलीमा दबदबा, राष्ट्रिय खेलकुदमा कमजोर
५. हल्क होगन
डब्ल्यूडब्ल्यूई बाट संन्यास लिसकेका स्टार रेस्लर हल्क होगनलाई हामीले धेरै लामो समयसम्म रिङमा देखेका थियौ । सम्पूर्ण संसार उनको रेस्लिङ शैलीको फ्यान थियो । उनी धनाड्य रेस्लरको सुचीमा पाचौं नम्बरमा छन् । उनको कुल सम्पत्ति २० मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
४. ट्रिपल एच
आफ्नो रेस्लिङ स्टाईल र एक्सनले फ्यानलाई मन्त्रमुक्ध गर्ने सुपरस्टार ट्रिपल एच हाल विभिन्न जिम्मेवारी निभाउदैछन् । हाल उनी डब्ल्यूडब्ल्यूईमा ग्लोबल ट्यालेण्ट एण्ड स्ट्रयाटेजी डेप्लोमेण्टका उपाध्यक्ष छन् । यस बाहेक उनलाई एनएक्सटी को जिम्मेवारी समेत दिईएको छ । उनको कुल सम्पत्ति ३१ दशमलव ३ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
यो पनि पढ्नु्होस्ः ५ बलर जसलाई कुनै पनि ब्याट्सम्यानले छक्का प्रहार गर्न सकेनन्
३. स्टोन कोल्ड स्टीभ ओस्टिन
स्टोन कोल्ड स्टीभ ओस्टिन सबैभन्दा धनी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टरको सुचीमा तेस्रो स्थानमा छन् । रीङमा बाइकबाट इण्ट्री र धमाकेदार प्रदर्शन उनको पहिचान हो । हाल उनको कुल सम्पत्ति ३५ दशमलव २ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
२. जोन सीना
डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जोन सीना विश्वका सबै रेस्लिङ प्रेमीहरुको हृदयमा राज गर्दछन् । लामो समयदेखि उनले रीङमा प्रभुत्व जमाउदै आएका छन् । रेस्लिङ प्रेमीहरुले उनको हार नमान्ने बानी र ईमानदार छवि मन पराउछन् । धनी सुपरस्टारहरूको सूचीमा जोन सीना दोस्रो स्थानमा छन् । धेरै फिल्महरूमा समेत अभिनय गरीसकेका जोन सीनाको कुल सम्पत्ति ४३ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
यो पनि पढ्नु्होस्ः ‘फुटबल भन्दा ठुलो मेरो देश हो’
१. द रक
हलिउड होस या डब्ल्यूडब्ल्यूई रिङ आफ्नो सानदार छवी बनाएका रेस्लर र अभिनेता द रक सबैभन्दा धनी डब्ल्यूडब्ल्यूइ सुपरस्टार हुन् । उनले फिल्महरू र डब्ल्यूडब्ल्यूइबाट धेरै पैसा र नाम कमाएका छन् । उनको कुल सम्पत्ति यति धेरै छ कि अरू कुनै डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार उनको वरपरसम्म पुग्न सक्दैनन् । द सनको रिपोर्टका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति २४४ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
यो पनि पढ्नु्होस्ः कोरोना भाईरसका कारण मृत्यु भएका खेलाडीहरुको सूची
Tags13th sag 13th south asian games big show broke lesnar himalayan tiger hulkholgan nepali wrestler himalayan tiger nepali wrestling player neplai sports news richest wrestler richest wwe superstar south asian games sports news the rock triple h wrestling in nepal wwe wwe superstar wwe wrestler कुस्ती चर्चित रेस्लर जोन सीना ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार द रक बिग शो ब्रोक लेस्नर मिक फोली सबैभन्दा धनी रेस्लर स्टोन कोल्ड स्टीभ ओस्टिन हल्क होगन हिमालयन टाइगर
Previous Postनाओमी र अजारेन्का वेस्टर्न एण्ड साउर्दन ओपनको फाईनलमाPrevious Post
Next Postयुएस ओपनको तालिका घोषणा,जोकोभिक पहिलो वरियतामाNext Post
राष्ट्रिय कुश्ती खेलाडीको प्रशिक्षण माघ पहिलो साताबाट
MeroKhelPosted on २३,पुष,२०७७ January 7, 2021 २ हप्ता पहिले
फाँसीमा झुण्ड्याईए ईरानी रेस्लर
MeroKhelPosted on २८,भाद्र,२०७७ September 13, 2020 ४ महिना पहिले
महिला खेलाडीको अनुभवः दशरथ रंगशालामा खेल्दा सपना पूरा भयो
स्पेशल अवार्ड मेरा लागी धेरै स्पेशल: सन्तोषी श्रेष्ठ
के गर्दैछ परेवा उडान खेल संघ
विश्वमा चर्चित नेपालमा गुमनामः रग्बी,तीनवर्षमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्दै
फुलहमले म्यनचेस्टर युनाइटेडको सामना गर्दै
सिटीलाई शिर्ष स्थानमा उक्लने राम्रो मौका
सेन्ट्रल कलेज भरतपुर माडी गोल्डकप फाइनलमा प्रवेश
Home>कुस्ति>सबैभन्दा धनी रेस्लरहरु (सुची सहित)